Lacagtii imtixaanada Laysanka oo la siyaadiyay | Somaliska
Lacagta lagu galo imtixaanada laysanka (körkort) ayaa dowlada wax yar ku siyaadisay. Horey ayaa imtixaanka kombutarka (kunskapsprov) waxaa lagu gali jiray 200kr halka kan baabuurka (körprov) lagu gali jiray 1100kr.
Hada ayaa lacagtaas waxaa laga dhigay 325kr oo imtixaanka kombutarka ah iyo 1200kr oo ah kan baabuurka. sababta loo siyaadiyay lacagta imtixaanada ayaysan cadeyn hay’ada qaabilsan arimahaan ee lagu magacaabo (Trafikverket).
Isku gaynta ayaa qofka waxaa kaga baxaya maritaanka labada imtixaan 1525kr. Inkastoo aysan lacagtaasi ahayn mid badan ayaa hadana qofku inta uusan galin imtixaanka waxaa ka baxaya qarashyo badan oo ay ugu horeyso lacagta lagu marayo barashada Khataraha (Riskutbildning) oo gaaraysa ilaa 2500kr. Waxaa intaas u sii dheer barashada teoriga iyo baabuurka oo aan yareyn. Qofka mara wadooyinka caadiga ah sida in uu galo iskuulada ayaa waxaa kaga baxda ilaa 15000kr soo qaadista körkortka.
September 16, 2012 at 13:50
asc sxb waan ku salamay jimcaale waad mahasdsan tahya ilase Aniga waxan ku wareersanahy mar hadan Nahay Dad wadanka aan u dhalan sideen ku Qaadi karnaa svenska Körkort madama lacagta Lagu kordhiyay?
Mahamed faqiir sanidaa meeqaa lacaga ayeeey dowladaan bilaaash kuu siisaa !
INDHAHAAD KA RIDAY ADEER says:
aar wuu uruuriyaa bahasha malaha adeer yanad ka dhimane iska cun ilahay baa faxane
Walaalayaal Maxaa idinka qaldan? oo aad wiilka Mohamed ah haduu fikadiira sheegtay aa u aflagaadaynaysaa? walaale yaal ma,idinkaa lacag siiya wiilka? war wax isku fala! oo ilaahay kaxishooda oo waxaa doontaan haso qorina!
September 17, 2012 at 01:14
Maxeey ugu dareen jiniga. Intaan kaqaadaahaaayo ama walbo mudada may badshaan u dhaxeyso tiori,korinka
Zaaxmada ayaa la rabaa in laga yareeyo waddooyinka, ma fahmaysiin?
September 22, 2012 at 23:15
Aqyaarta marka hore waad salamantihin qofka fikradiisa in lagu mucarado mahan.Körkort-ka waa muhim laakin dhibka ugu badan ayaa ah in lacag badan ay ku baxeyso weliba qofka aan weligiis gaari wadin.iyadoo badanaa dadka ay imtixaanka ku soo dhacaan ama magalooyinka qaar ay adagtahay in lagu qaado körkort.